Qiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Chelsea vs Southampton – Xiddigii Garoonka & Laacibiintii Fashilmay – Laacibnet.net
Qiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Chelsea vs Southampton – Xiddigii Garoonka & Laacibiintii Fashilmay
Chelsea ayaa barbarro 3-3 ah kala kulantay Southampton oo ugu timid garoonka Stamford Bridge, waxaana waqti dambe Blues laga diiday guusha oo ay ku dhowaayeen inay la rawaxaan.
Laba gool oo Chelsea uu u dhaliyey Timo Werner ayaa keentay in Blues ay 2-0 hoggaanka ciyaarta ku qabato, waxaase ka daba yimid Danny Ings oo gool qurux badan oo uu goolhayaha u jaray u dhaliyey Southampton ka hor intii aanay qalad wada samaynin Kurt Zouma iyo Kepa oo uu ka faa’iidaystay Che Adams oo 2-2 ka dhigay ciyaarta daqiiqaddii 57aad.
Chelsea ayaa laba daqiiqadood oo kaliya ay ku qaadatay inay mar kale hoggaanka ciyaarta la wareegto, waxaana kubbad uu kahdka dhexe kasoo shaqeeyey Christian Pulisic ay lugtiisa gashay Timo Werner oo isaguna goolka u hor dhigay saaxiibkiisa ay Jarmalka u wada ciyaaraan ee Kai Havertz.
Ciyaarta oo sii dhamaanaysa ayay Southampton goolka barbarraha dhalisay, waxaana u saxeexay Vertergaard, taas oo soo afjartay rajadii guusha ee Frank lampard uu waqtiga hore isasiiyey.
Timo Werner oo laba gool oo qurux badan dhaliyey, ciyaarta oo dhanna ahaa khatarta ugu weyn ee Southampton ay waajahaysay ayaa waxa uu noqday xiddigii uug wanaagsanaa garoonka, isaga oo helay darajada 9 ee qiimayntii kulanka.
Ma jirin ciyaartoy kale oo qiimaynta Timo Werner oo kale ka helay garoonka.
Kepa Arrizabalga oo qaybta ugu weyn ku lahaa qaladka goolka labaad ee laga dhaliyey, sidoo kalena bandhiggiisu aanu fiicnayn ayaa noqday laacibka ugu liitay garoonka dhamaan labada kooxood marka la isku geeyo, waxaana uu helay darajada 4 oo ay ka midaysnaayeen Bednarek oo Southampton ah. Christensen iyo Azpilicueta ayaa iyaguna aad u liitay kulankan.
Beddelka: Ziyech (5), James (NA), Abraham (NA)
Beddelka: Tella (NA), Long (NA), Diallo (NA)
Xagee ka keenteen qiimayntan waaa khalad qiimayntiinu